Samachar Batika || News from Nepal » …त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….!
हामीले भएको विवरण सबै जस्ताको तस्तै दिएका छौं । अ’परा’ध गरेको घटना लुकाउन डर नै छैन । म किन सडकमा आएँ ? म सडकमा आउन बा’ध्य पारिनुपछाडिका कारण के छन् ? यस्ता विषयमा अध्ययन गरी हामीलाई परिवार र समाजमै पुनःस्थापना गर्ने हो भने अ’परा’धमु’क्त र मानवमुक्त सडक बनाउने अभियान सफल होला कि ?
प्रकाशित मिति १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०२:४५